चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतको लागी ; आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय! – Life Nepali
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतको लागी ; आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय!
काठमाडौँ। नेपाल सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने राजकीय भ्रमणको दोश्रो दिन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बिदा दिने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले सीको स्वागतका लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहको प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी शनिबार राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछन् । भ्रमणलाई सफल पार्न सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ । दुईदिने भ्रमणको दौरानमा विभिन्न सम्झौता हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने भएपछि सु’रक्षा व्य’वस्थालाई क’डा बनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी दुईदिने भ्र’मणका लागि शनिबार चिनफिङ नेपाल आउने जानकारी गराएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको सु’रक्षा व्य’वस्थालाई क’डा पारिएको हो ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको सु’रक्षाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तालिका हेरेर आ’वश्यक प्रहरी खटाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ, उहाँको सु’रक्षामा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रहरीले सी चिनफिङको सु’रक्षाका लागि उपत्यका बाहिरबाट समेत थप जनशक्ति झि’काउने तयारी गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको सु’रक्षाका लागि पहिलो घे’रामा नेपाली सेना, दोस्रो घे’रामा नेपाल प्रहरी, तेस्रो घे’रामा स’शस्त्र प्रहरी बल र चौथो घे’रामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सु’रक्षाक’र्मी रहने बताइएको छ ।
Previous प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीले भने– पद र अनुहार नहेरी अ*नुसन्धान गर्नुहोस्
Next बस दु’र्घटना ११ जनाको मृ*त्यु – घा’इतेलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ लैजादै !